Isiraely: Fony namono an’I Rabin i Yigal · Global Voices teny Malagasy
Isiraely: Fony namono an’I Rabin i Yigal
Voadika ny 08 Novambra 2007 8:53 GMT
Indroa praiminisitry Isiraely Atoa Yitzak Rabin dia tamin’ny 1974 – 1977 sy tamin’ny 1992 ka hatramin’ny namonoana azy tamin’ny 1995. Efa nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana Atoa Rabin raha novonoin’ilay mafana fo antsoina hoe Yigal Amir avy amin’ny hery farany havanana indrindra izay nanohitra tamin’ny heriny rehetra ny fifanarahan’I Oslo [Norvezy].Satria moa nanamarika ity herinandro ity (tamin’ny andro nanoratana azy tamin’ny teny anglisy izany) io faha-12 taona namonoana an’Ytzak Rabin io dia maro ireo bolongana Isiraeliana no nanolo-pahatsiarovana ny zavabitan’ity rangahy ity teo amin’Isiraely sy ny fiafarana mampalahelo teo amin’ny tantarany. Sendra indrindra ny bolongan’i Yossi aho izay nitantara ny zavatra niainany, 12 taona lasa izay, fony mbola mpianatra tao amin’ny Yeshiva (Sekoly ambony ianarana ny Baiboly), izay niara-dalana tamin’ny fiaraha-monina Ortodoksa faratampony tao Jerosalema, izy tamin’izany fotoana izany.
Misaotra anao indrindra ry Yossi nitantara sy nizara izay fantatrao tamin’ity raharaha ity tao amin’ny bolonganao. Mba nahafahana mitaratra izay tao anatin’ny fiaraha-monina mirindrina sy ambadiky ny varavarana mikatona mandrakariva manko izay nosoratanao. Mbola amafisin’izay nosoratanao ny mahazava-dehibe ny fahazoam-baovao amin’ny ankapobeny sy ny fampielezana ny karazam-pomba fijery marobe. Ity fomba fijery ity izao dia tsy mba fahita loatra.
Mbola mpianatra vao tonga aho tamin’izany fotoana izany, ary tsy misy na inona na inona fantatro ny amin’izany Rabin izany.Indray alina manaraka ny Sabata (ny sabata namonoana an-dRabin), tahaka ny alina manaraka ny Sabata rehetra ihany dia mbola nisy vitsivitsy taminay no mbola nianatra raha efa namonjy fodiana na nankany amin’ny efitra fatoriana ny maro hafa rehetra.Teny an-dalana hody avy nianatra aho no nandre horakora-kafaliana, sakafo be sy mozika tao amin’ny efitra fatoriana, zava-panao mifanohitra tanteraka raha misy fahafatesana aloha hitako. Nanontany ny namako ny amin’izay mahatonga izao firavoravoana izao aho, raha mety ho diso daty aho dia tsaroako kosa fa tsy misy androm-piravoravoana Jiosy mihitsy tamin’io fotoana (volana) io.
Namaly ny iray – “Maty Rabin, voatifitra izy rahalahy”
Nanontany aho – “Fa iza izany?”
Dia namaly izy – “Ny praiminisitra e!”
Mbola nanontany ihany aho – “Fa Jiosy angaha izy? (tsy jiosy no fihaino ny anarany)Dia hoy ny valiny hoe – “ Jiosy izy ka!”
Dia nanontany aho raha tokony hahafaly izany famonoana Jiosy izany. Efa nilaza rahateo ny Baiboly hoe aza mifaly amin’ny fahalavoan’ny fahavalonao (”בנפול אויבך אל תשמח”), ary efa nametraka koa ny Midrash hoe hajao noho ny zavatra hafa rehetra toy ny Jiosy ny fahavalonao tsy-jiosy (”אוייבך הגוי, קל וחומר יהודי”).
Hoy ny nasetriny – “Fa Nahoana moa ianao no manakotaba ny fifalianay? Mandehana miverina mianatra. Niteny ny Raby (mpampianatra) fa mila mifaly isika satria alakaosy mpanimba vintana [mpanakorontana ny ho avy] (דין רודף) ilay rangahy iny (Yitzak Rabin)!”
Tsy nahafa-po ahy ny valinteny – Sady tsy nanjombona aho no tsy nihomehy. Raha todihina ny lasa dia nifamahofaho be ihany ny valinteny satria dia tamin’ny fomba toy izany indrindra no nanabeazana ahy, tahaka ny nanabeazana ny namako tao amin’ny Yeshiva ihany, na dia ao anatina tontolo tsy misangisangy aza no misy anay.
Ankehitriny, nahatafakatra ahy teny an-tampon’ny fahatezerana ilay valinteny. Ahoana moa ny nahatonga ity Fanjakana Isiraely hamatsy tontolom-panabeazana mampianatra hamono olona ity? Ary mifaly rehefa nisy namono ny mpitondrany (praiminisitra)? Ary ahoana ny fanamafisana ny fitantanana eto amin’ity firenena ity, izay tsy misoroka ny famporisihana sy izay tian’ny Raby atao na inona na inona, amin’ny alalan’ny fitakiana fahalalahana hiteny sy fahalalaham-pivavahana.
Moa adinontsika fa eo ampanorenana taranaka vaovao isika izao, izay mety ho feno mpamono olona tahaka an’Yigal Amir. Afaka mijery ny fanagonan-tsonia ny amin’izany indrindra isika.
Tsy maintsy miteny aho fa tena ihamboko mihitsy ny fahazazako fony izaho Jiosy Ortodoksa faratampony. Maro ny zavatra fantatro izay tsy hianaran’Isiraelin’izao tontolo izao na oviana na oviana – momba ny tenako, ny zavatra mety ho vitako ary ny fianarana tena izy aminy. Fa izay tena mahatezitra ahy kosa dia ny fisiana sekoly manana fisainana manao hoe – rehefa tsy mifanaraka aminao izay ataony dia afaka alatsaka ny rany (”מי שלא מתאים לך דמו מותר”).Io no tsy azoko.
13 ora izayTiorkia
2 herinandro izayKoety
Taorian'ny namonoan'ny lehilahy koetiàna iray ny vehivavy iray tao amin'ny fianakaviany, nohavaozina ireo antso hisian'ny fiarovan'ny governemanta
2 herinandro izayBahrain
Bahreïn : kintan'ny fanatanjahantena vaovao, Ruqaya Al Ghasra